“Somaliland Maanta Waa Casrigii Bilaash Xayteyaasha, Alla Badanaa Inta Aan Bilaale Caddaynayn Ee Kursi U Xiiqsani” Sh. A.Siiro | FooreNews
Home wararka “Somaliland Maanta Waa Casrigii Bilaash Xayteyaasha, Alla Badanaa Inta Aan Bilaale Caddaynayn Ee Kursi U Xiiqsani” Sh. A.Siiro
“Somaliland Maanta Waa Casrigii Bilaash Xayteyaasha, Alla Badanaa Inta Aan Bilaale Caddaynayn Ee Kursi U Xiiqsani” Sh. A.Siiro
“Maanta Dalkeena Waxa Halkaa Dhigay Nin Habeen Iyo Maalin U Xaydan In Uu Maatida Soo Ururiyo Oo Ay U Sacabo Tumaan”
Hargeysa (Foore)- Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Aadan Siiro) oo ka mid ah culimada waaweyn ee Somaliland khudbaddoodana aad loo jecel yahay ayaa sheegay in maanta dalkeenu ku jiro xaalad adag oo ay lagama maarmaan tahay in laga hadlo dadka caqliga u saaxiibka ahina u fikiraan sidii loo badbaadin lahaa isaga oo sheegay in uu khudbadaha soo socda ku qaadaa dhigi doono sida uu xalka ugu dambeeya ee mustaqbalka dalka u arko.
Sheekh Aadan Siiro waxa uu walaac weyn ka muujiyey kaambaynada siyaasadeed ee dad sida uu sheegay aan bilaale umadda u caddaynayni durbaanada u tumanayaan ee maatida u soo saarayaan iyaga oo aan wax waxqabad ah iyo mustaqbal toona u hayn isaga oo dhinaca kale shacabka qaarkii ku dhaliilay in ay noqdeen kuwo dhadhamo yar oo la siiyo ku sacabo tumaya. Sheekh Aadan Siiro waxa uu sidan ka sheegay khudbaddii Salaadda Jimce ee shalay Masaajidka Quba ee xaafadda Xawaadle kadib soo laabashadiisa isaga oo muddo kooban dadla dibaddiisa ku maqnaa.
Sheekh Aadan Siiro oo arrimahaa ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Dalkan Somaliland maanta inta hogaaminaysaa waa casrigii Bilaash xaytayaasha ayaa la yidhaa. Waayo mid aan waligii Koob ama bilaale caanayn, midna aan caanaynayn. Waxtarkiisa ay ka badan tahay waxyeeladiisu boqolkiiba Sagaashan intuu umadda yeelayo. Kuwaasaa maalin walba kumanaan hablood iyo ubadkeenii ah inta madaxa loo soo qaawiyo. Hooyooyinkii ayaa loo soo saarayaa oo sacabka u tumaya oo ay dantoodii ka mashquulinayaan. Maanta dalkeena waxa halkaa dhigay nin habeen iyo maalin u xaydan oo shaqadiisu tahay, magac u samaystay oo halkudhigyo u samaystay islaantaa tobanka agoonta ah haysata ee daasadda tamaandhada ah 5:30 u kallahaysa. Taasi iyo kumanaan kale oo tamaandhada suuqa la fadhiista ayaa xaflado loo samaystay oo qaarkood shilimaad yar loo daadinayaa”. Ayuu yidhi Sheekh Aadan Siiro isaga oo intaasi ku daray tusaale uu u soo qaatay sidii dadkii wanaagsanaa ee reer Hargeysa u ilaalin jireen hantida umadda waxaanu yidhi:
“Xaafaddan waxa ay leedahay laba goobood oo dan guud ah, oo waataa aad aragtaan in meel walba lagu kala tagaye waxa u soo hadhay oo kali ah bedkaa ay ku fadhido Idaacaddu iyo gurigaa Gobonimo ee hore loo odhan jiray Xisbiga. Tusaale ahaan halkan Idaacadda waxa ku wareegsanaan jiray taar yar oo bir ah. Ciyaalnimadii waxa goosan jiray caruurta oo taarka ka samaysan jiray usha lagu kaxeeyo baabuurta yaryar ee daasadaha laga sameeyo. Waxaan xasuustaa Ibraahim Saacadaale Ilaahay ha u naxariistee iyo odayaashii xaafadda oo ku hareeraysnaa dhismahan ayaa ilaalin jiray dantaa guud. Kamay hadhi jirin haddii ay arkaan inan yar oo birtaa taarka ah wax ka goosanaya illaa uu daalo oo ay ka so qaadaan. Waxaan uga jeedaa sida dadkeenu u laalin jireen hantida umadda ka dhaxaysa. Waxaan uga jeedaa in aynu xasuusano dadkeena wanaagsan ee umadda wax u taray. Ilaahay aan dambi dhaaf u waydiino.” Ayuu yidhi Sheekh Aadan Siiro.
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in badna oo dadkeena ah oo maanta noqday kuwo u sacab tuma cid kasta oo shilimaad kooban u dhiibta haddii kale ay noqonayaan kuwo cid walba nacdalaya taasi oo uu ku tilmaamay sifo ka mid ah sifaadka munaafiqiinta waxaanu yidhi: “Damaca maanta dalkeena ka jiraa waxa weeyi kuwa ilaahay qur’aanka ku sheegay oo kale. Waa kuwa Ilaahay Yidhi haddii wax la siiyo raalli bay ahaanayaan. Waa kuwaa maanta haddii la soo ururiyo oo shilimaad yar la siiyo raalli noqonaya ee sacabka garaacaya ee odhanaya waa la soo daahiray haddii aan waxba la siina waakuwaa cadhoonaya ee dalka, dadka iyo cid walba nacdalaya. Taasina waa sifooyinka munaafiqiinta ee Ilaahay innooga warramay”.
Sidoo kale Khudbaddii shalay Sheekh Aadan Siiro waxa uu ugu duceeyey oo ku soo qaaday Marxuum Xuseen Cumar Ducaale oo ahaa muwaadin reer Somaliland ah oo muddo badan deganaa dalka Qatar oo Hargeysa ku geeriyooday darraad kaasi oo aan cidina ku baraarugin janaasada maydkiisa isaga oo marxuumkaasi ahaa dadkii dalkan sida weyn ugu soo adeegay. Sheekh Aadan siiro oo arrintaa ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Shalay (Dorraad) waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday Xuseen Cumar Ducaale. Alla Ha Naxariistee waxa uu ahaa dadka dhifta ah ee la yidhaahdo daljirka dahsoon. Waxa uu ahaa nin umadda u adeega. Umaddani in ay noqoto ummad jirta oo meel u socota ayuu ahaa nin habeen iyo maalin ku hawlan. Anoo darraad uun kasoo laabtay India. Aadbaan uga xumaaday in aanan ka qayb galin janaasaddiisa. Haddii maanta ninkaasi qiimahiisa la garanayo dadkaa isugu iman lahaa janaasada maydkiisa. Badanaa in badan oo qiimo umaddan ku leh oo aan la ogayn. Xuseen Cumar Ducaale waxa uu ahaa dadka ugu darajada sarreeya shaqo ahaan iyo aqoon ahaanna waddanka Qatar. Waxa uu ahaa ninka ajaanibka ugu mushahar badan ee karti iyo wanaag loo daayay. Waxa uu ahaa ninkii kali ahaa ee Baasaaboor Somaliland ah Ciqaamad kaga dhufsaday isaga iyo xaaskiisa dalka Qatar ama guud ahaan dal carbeed oo dhan isaga ayaa ahaa ninkii ugu horreeyey ee baasaaboorka Somaliland Qatar Ciqaamad ugu dhufatay si uu u muujiyo muwaadinimadiisa iyo jacaylka dalkiisa.” ayuu yidhi Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud.
Previous PostKhilaaf Ka Dhex Qarxay Wasaaradaha Arrimaha Qoyska Iyo Diinta/Awqaafta Oo Ku Saabsan Aragtida Diineed Ee Joojinta Gudniinka Gabdhaha (FGM) Next PostShirkad Telefishanka Qaranka Deyn Lacageed Uga Goosatay Agab Muhiim U Ahaa Baahimaha Tooska Ah